पाल्पामा पूँजीगत तर्फ ६१ र चालुतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट खर्च - Boli Dainik
पाल्पा । आर्थिक वर्ष २०७५\_०७६ मा पाल्पा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले पूँजीगत तर्फ ६१.९९ प्रतिशत र चालुतर्फ ९०.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
संघको पूँजीगततर्फ ५५.२२, चालुतर्फ ९४.१२ र प्रदेशको पूँजीगततर्फ ७५.८६ । चालुतर्फ ७१.२५ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक खेमराज घिमिरेले बताउनुभयो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट संघअन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि प्राप्त पूँजीगत तर्फ ४ अरव ६८ लाख २६ हजार ९९ रुपैंया मध्य २ अरव २१ करोड २७ लाख ५४ हजार ४सय ७० रुपैया खर्च भई १ अरब ७४ करोड ४७ लाख २८ हजार रुपैंया खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको छ । चालु तर्फ ५ अरव ६४ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैँया विनियोजित मध्य ५ अरब ३१ करोड ३१ लाख ७७ हजार खर्च भई ३३ करोड २० लाख ७८ हजार ८ सय ५ रुपैया फ्रिज भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट चालु तर्फ प्राप्त ९९ करोड १ लाख ५४ हजार मध्य ७० करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैया खर्च भई २ करोड ८४ लाख ७० हजार रुपैया खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको छ । पूँजीगत तर्फ १ अरव ७० करोड ९४ लाख ५१ हजार मध्य १ अरब ३३ करोड १० लाख ४ हजार खर्च भइ ३७ करोड ८४ लाख ४७ हजार फ्रिज भएको छ । कोभिड १९ को संक्रमणको त्रास, लकडाउन हुँदा निर्माण सामाग्रीको अभाव, कामदार फिर्ता र निमार्ण स्थलमा सुरक्षाको जोखिम हुँदा वित्तीय प्रगति नभएकोले ठुलो रकम फ्रिज भएको छ ।
संघको पूँजीगत तर्फ ५२.२२ प्रतिशत र चालु तर्फ ९४.१२ प्रतिशत वितिय प्रगति भएको छ । संघअन्र्तगत डिभिजन सडक कार्यालयलाई प्राप्त चालु तर्फ १ करोड ५३ लाख ९० हजार मध्य १ करोड २२ लाख ५६ हजार खर्च भइ ७९.६४ प्रतिशत वितिय प्रगति भएको छ । पूँजीगत तर्फ ४६ करोड ८२ लाख २८ हजार मध्य २१ करोड ४० लाख ५ हजार रुपैया खर्च भई संघीय कार्यालयहरु मध्य सबै भन्दा कम ४५.७० प्रतिशत वितिय प्रगति देखिन्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको खर्चको स्थिति कोभिड १९ ले नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याएको छ ।
उत्तर दक्षिण कालिगण्डकी कोरीडोर लागि प्राप्त चालु तर्फ १ करोड ८ लाख ७६ हजार मध्य ९० लाख ३६ हजार र पूँजीगत तर्फ १ अरब ९९ करोड ४९ लाख ५० हजार मध्य १ अरव ७ करोड १६ लाख रुपैया खर्च भइ वित्तीय प्रगति ५३.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । संघअन्तर्गत पुल योजना पशिचम सेक्टर कार्यालयको वित्तीय प्रगति सबैभन्दा बढी भएको छ । पुल योजनाको चालुतर्फ १ करोड १२ लाख ३९ हजार मध्य ७० लाख १३ हजार खर्च भई वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगततर्फ ४२ करोड ९४ लाख ३५ हजार मध्य ४० करोड ३६ लाख ३३ हजार रुपैंया खर्च भई ९३. ९९ प्रतिशत वितिय प्रगति भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई चालुतर्फ निकासा भएको एक करोड ४२ लाख ४६ हजारबाट १ करोड १८ लाख ७२ हजार खर्च भई ८३. ३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र पूँजीगत तर्फ ७० करोड ८५ लाख ७४ हजार मध्य ६४ करोड ४० लाख ५० हजार खर्च गरी ९०. ८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । डिभिजन वन कार्यलयले ९१.०५ प्रतिशत, भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलयले ८४.३८ प्रतिशत, कृषि ज्ञान केन्द्रले ९९.६१ प्रतिशत, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको ४४.१० प्रतिशत, सडक पुर्वाधार विकास कार्यालयको ६९.३४ प्रतिशत र डिभिजन सिंचाइ कार्यालयको ६१. ०५ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष जिल्लागत बजेट वृद्धि भए तापनि खर्चको दर भने कम भएको भएको छ । यो तथ्यांकमा स्थानीय तहको खर्च भने गणना गरिएको छैन ।